Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A October 2012 (1)
Q and A October 2012 (1)
1. ကျွန်တော်က ရေကြောင်း ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။
2. I got the problem with hair loss for one year.
3. ကျွန်တော့ရည်စား တစ်ခါတလေ
4. ကျွန်မ အသက်က ၄ဝ ပါ။ ရပ်ဝေး တစ်နေရာမှာ
5. ၁၆ ရက်သား ကလေးမလေးတယောက် G6PD Deficient ဖြစ်ပြီး
6. အနီစက်ကလေးတွေ ထပ်ပေါ်လာပြီး
7. ကျွန်တော်ဧ။်အမေအတွက် အလွန်စိတ်ပူနေပါတယ်။
8. ၁၉၉၇ ခုနှစ်က ညာဘက် နားရွက်အောက်ဘက်နားမှာ
9. My name is (့), age 28 years.
10. သမီးလည်ပင်းမှာ အဖုသေးသေးလေး ပေါက်နေတာ ကြာနေပြီ။
Tue, Oct 2, 2012 at 10:21 PM
ကျွန်တော်က ရေကြောင်း ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ မကြာခင်မှာ (့) ကို Sea Training သွားရမယ်ခင်ဗျ။ သင်္ဘောလည်း တစ်ခါမှမစီးဖူးပါဘူး။ လှိုင်းမူးခဲ့သည်ရှိသော် ဘယ်လိုသောက်ဆေးတွေ သောက်သင့်သလဲခင်ဗျ။ ပြီးတော့ လှိုင်းမူးသက်သာအောင် လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းရှိရင်လည်း ပြောပြပေးပါခင်ဗျ။
• Anti Emetics အအန်ပျောက်ဆေးများ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2009/07/anti-emetics.html
Tue, Oct 2, 2012 at 9:43 PM
I got the problem with hair loss for one year. Give me advice how to control for the hair dropping. After showering, I wipe out the water from my head at that time I had seen my towel gotalot of hair dropping. I never use the shampoo for6months. I ever used the soap, named LUX. I ever apply the coconuts oil.
• Hair Loss ဆံပင်ကြွတ်ခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/hair-loss.html
• Hair Loss in Women Treatments ဆံပင်ကျွတ်တာ ဘာနဲ့ကုမလဲ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/03/hair-loss-in-women-treatments.html
• Hair & Health ဆံပင်က သင့်ကျန်းမာရေးကို ပြောနေတယ် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/03/hair-health.html
Thu, Sep 27, 2012 at 8:43 PM
ကျွန်တော့ရည်စား တစ်ခါတလေ သွေးအားနည်းပြီး မူးလဲတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ပင်ပန်းတဲ့အခါမျိူးနဲ့ စိတ်ညစ်တဲ့ အခါမျိူးတွေမှာပါ။ အဲဒါ ဘယ်လိုဆေးမျိူးနဲ့ ဘယ်လို အစားအသောက်မျိူးတွေစားရင် သက်သာမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
Fri, Sep 28, 2012 at 7:16 PM
ကျွန်မ အသက်က ၄ဝ ပါ။ ရပ်ဝေး တစ်နေရာမှာ အလုပ်လုပ်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပတ်လောက်ကစပြီး ဝမ်းဗိုက်ဘေး ဘယ်ဘက်ခြမ်းနေရာမှာ တင်းတင်းကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ လမ်းလျှောက်၍လဲ မကောင်းပါ။ ဆီးလဲ နည်းပါတယ်။ နေ၍ထိုင်၍ မကောင်းပါ။ အရမ်းအောင့်တာမျီုးတော့ မဟုတ်ပါ။ ပင်ကိုအားဖြင့် ရေသောက် နည်းပါတယ်။ ရန်ကုန်မှ ပို့ကုန်များသာ အဓိက စားသောက်ရခြင်းတော့ ရှိပါတယ်။ လေကြောင့် ဖြစ်တာလား သို့ ဆီးကျောက်တည်ခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသလား သိချင်ပါတယ်ရှင့်။ လွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်ခန့်က ဆီကျောက် တည်ဖူးပြီး မခွဲမစိတ်ဘဲ ပြန်ကောင်းဖူးတာတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားဖြစ်၍ ဆေးရုံပြရန် အခက်အခဲတော့ ရှိပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက် ဘယ်ဘက်ဆိုရင် လေ နဲ့ ဝမ်းဖြစ်နိုင်တာ များတယ်။ ကျောက်ကပ်ဆိုရင် နောက်ဘက်ကဖြစ်မယ်။ ဝမ်းမှန်ပါစေ။ အဖြူဆင်းတာမျိုး ရှိရင်ပြန်ပြောပါ။ ရာသီဆင်းတာ ပြောစရာရှိရင်တော့ ပြောပါ။
Facebook 29-9-2012 at 2:25 PM
ဆရာရှင့် ၁၆ ရက်သား ကလေးမလေးတယောက် G6PD Deficient ဖြစ်ပြီး Serum Bilirubin က တက်လုိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကလေးလေးက ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် ဒီရောဂါရတတ်ပါသလဲရှင့်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရမဲ့နည်းလမ်း ရှိပါသလားရှင့်။ Hemolytic Anemia ရနိူင်ပါသလားရှင့်။ ကြီးတဲ့အထိ ဒီရော၈ါရသွားမလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်ရှင့်။
• G6PD မွေးရာပါရောဂါ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/09/g6pd.html
ကျေးဇူး အရမ်းတင်ပါတယ်ဆရာ။ ဒါဆိုခုဟာကမွေးရာပါသဘောပေါ့နော်။ လုံးဝကြီးကောင်းဖို့ မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဆိုတော့ အရမ်းစိုးရိမ်မိတယ်။ ပိုဆိုးလာမှာလည်း စိုးရိမ်မိတယ်ဆရာ။ မိခင်အနေနဲ့ ခုချိန်မှာ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေ စားသင့်သလဲ။ ကလေးအစားစားတတ်ချိန်ဆို ဘယ်လိုအစားအစာတွေ ကျွေးသင့်သလဲ။ ဘယ်လိုအစာတွေ ရှောင်သင့်သလဲဆိုတာလည်း သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ပဲနာမည်တွေက အင်္ဂလိပ်လိုတွေဆိုတော့ အခက်တွေ့နေပါတယ်ဆရာရှင့်။
စာထဲမှာ ပါပါတယ်။ ဒီလိုကလေးတွေ မနည်းဘူး။ ဆရာ့ဆီ မေးကြတာကိုက မနည်းဘူး။ ဆရာလဲ ပဲနာမည်တွေ မြန်မာလို သိပ်မသိပါ။ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကို တိုင်ပင်ပါ။
Sun, Sep 30, 2012 at 3:43 PM
ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ် ကျော် လောက်က ညာဘက်ရင်သားအောက်ဘက်နားမှာ အနီစက်ကလေးတွေနဲ့ ယားနာလို့ အဖုလေးတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ကုတ်တော့ တဖြည်းဖြည်း အကွက်နီလေး ဖြစ်သွားပါတယ်။ နောက်ရက်တွေမှာ ညာဘက်ခြမ်းမှာဘဲ ပခုံးနဲ့ ကျောအောက်ဘက်မှာဘဲ အနီစက်ကလေးတွေ ထပ်ပေါ်လာပြီး တအားယားလွန်းတော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြဖြစ်ပါတယ်။ Hydrocortisone cream USP 1 % Anti-itch cream ကိုပေးပါတယ်။ လိမ်းတာ မသက်သာသလို အနီစက်လေးတွေက ပိုများလာလို့ နောက်တရက် လိမ်းဆေးနဲ့ BENADRYL 50 mg (every6hrs) သောက်ဆေးနဲ့ တွဲပေးပါတယ်။ ပေးတဲ့ဆေးတွေကို ဆက်သောက်ပြီး မသက်သာလို့နောက် ၂ ရက်နေ ထပ်ပြတော့ Hydrocortisone cream USP 2.5 % Anti-itch cream ကိုပြောင်းပေးပြီး BENADRYL 50 mg သောက်ဆေးအပြင် Loratidine (Claritin) 10 mg ကို တနေ့တလုံး သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ Methylprednisolone4mg ကို ၆ ရက်စာကဒ်မှာ ပါတဲ့အတိုင်း သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ဆေးတွေသာကုန်သွားပါတယ် ယားမြဲ ယားလျှက်ပါဘဲ။ မသက်သာလို့ နောက်တခေါက်ထပ်ပြတော့ နောက်ဆရာဝန်မတယောက်က scabies ဆိုပြီး Permethrin Cream5% နဲ့ Amoxicillin 500 mg ကို ၈ နာရီခြားသောက်ခိုင်းထားပါတယ်။ အခု နောက်ဆုံး ဖြစ်နေတာက လက်ကောက်ဝတ် နှစ်ဘက်လုံးနားမှာ ဗြုတ်ထနေသလို ဖြစ်နေပြီး ရေကြည်ဖုလေးတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဓါတ်ပုံပါ ပူးတွဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသက်က ၃၁ နှစ် ကျန်းမာရေးက ပုံမှန်ပါဘဲ။ အမျိုးသမီးရာသီစက်ဝန်း ပုံမှန်လာတဲ့သူ မဟုတ်ပါ။ နောက်ကျပါတယ်။ မြန်မာပြည်က မိဘတွေကို ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတော့ ရေကျောက်လို့ထင်ရလို့ ရေမချိုးခိုင်းထားပါဘူး။ အရင်က ရေချိုးပြီးရင် ပိုယားပါတယ်။ လက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဘက်က အမြဲပူနေပါတယ်။ ဆရာဝန်ကိုလည်း chicken pox လားလို့မေးတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ သူငယ်ငယ်တုန်းက တခါမှ ရေကျောက်မပေါက်ဖူးပါ။
ဆေးတွေလဲစုံပါတယ်။ ပုံတွေအားလုံးကြည့်မှ မှန်းရတာပိုအဆင်ပြေတယ်။ ၁ ခု ၂ ခုနဲ့မလုံလောက်ဘူး။ အခြေခံက (အလာဂျီ) ကနေစခဲ့ပြီး ပိုးဝင်လာတယ်။ ပိုးကလဲ ဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ လက်ကဟာဆိုရင် ဗက်တီးရီးယားဖြစ်မယ်။
(ကော်တီဇုန်း) စားဆေးတော့ အညွှန်းချင်ပါ။ ရက်ကြာတာမို့ လိမ်းဆေးတော့လိုနိုင်တယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုရင်လဲ ကော်တီဇုန်းလိမ်းဆေးသိပ်မသုံးသင့်ဘူး။
- Cetrizine တခါသောက် ၁ လုံး၊ တနေ့ ၁ ကြိမ်သောက်ပါ။ Banadryl ကလဲ အဲလိုဆေးဘဲ။ အိပ်ချင်တယ်။
- Calamine lotion နဲ့ မြန်မာ သနပ်ခါး လိမ်းပါ။
- အနာလို အဝပေါက်လာပြီး စိုလာရင်တော့ အဲဒီနေရာမှာ အနာလိမ်းဆေး တခုခု လိမ်းပါ။ ရှေးဦးသူနာပြုအိတ်ထဲမှာပါတာမျိုးရပါတယ်။
- ပိုးသေဆေး တခုခုလိုမယ်။ Amoxacillin တော့သောက်ထားတယ်။ ဘယ်နှစ်ရက်လဲ မသိပါ။ ၄-၅ ရက် သောက်ရမယ်။ အဲဒါနဲ့ မရရင် Doxycycline 100mg တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၄-၅-၆ ရက် သောက်ပါ။
Mon, Oct 1, 2012 at 9:21 PM
ကျွန်တော်ဧ။်အမေအတွက် အလွန်စိတ်ပူနေပါတယ်။ အမေကငယ်ငယ်လေးကတည်းက နှလုံးကအခန်းတစ်ကန့် ပျက်နေလို့ ပြောဖူးပါတယ်။ အဲဒါဆေးကုထားခဲ့ပါတယ်။ နှလုံးအခန်းတစ်ကန့် မကောင်းပေမယ့် အသက် ၅၄ နှစ်အထိ ကျန်းကျန်းမာမာပါပဲ။ နှလုံးအဆို့ရှင် ကျဉ်းတယ်လည်းပြောပါတယ်။ အသက် ၅၄ မှာနေမကောင်းဖြစ်ပြီး မောလို့ ဆေးရုံသွားပြတော့ ခွဲမှရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အမေကခွဲရမှာအရမ်းကြောက်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ မခွဲပဲကောင်းဆုံးဆေးကို ညွှန်ပေးပါဆိုပြီး ဆရာဝန်ဆီက ဆေးတောင်းပြီးသောက်နေတာ ပြန်ကောင်းလာပါတယ်။ အခုအသက် ၅၇ နှစ်ကျတော့ အရင်လိုမောပြီး နေမကောင်းပြန်ဖြစ်လို့ ဓါတ်မှန်သွားရိုက်တော့ နှလုံးအခန်းက အရင်တစ်ကန့်ကနေ အခုသုံးကန့်အထိ ပျက်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ တစ်ကန့်ပဲ ကောင်းတော့တယ်တဲ့။ အဲဒီတစ်ကန့် ကောင်းသေးလို့ နှလုံးခုန်နေသေးတာတဲ့။ အမေလဲ တော်တော်စိတ်ဓါတ်ကျသွားပါတယ်။ အခုနေခွဲရင်လဲ ပြန်ကောင်းဖို့ မလွယ်တော့ဘူးတဲ့။ အခုအမေရဲ့ အခြေအနေက အမြဲမောမောနေပါတယ်။ ဖြစ်တာ တစ်လလောက်ရှိပါပြီ။ အဲဒါခွဲရင်လည်း အာမခံချက်မရှိဘူးဆိုလို့ မခွဲရဲပဲ ဆရာဝန်ဆီက ကောင်းတဲ့ဆေးပဲ သောက်နေတာ သိပ်မသက်သာပါဘူး။ အမေရဲ့ နှလုံးတစ်ကန့်နဲ့ဆို အသက်ရှင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေ ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ အချိန်ဘယ်လောက်ထိလဲ။ ဆရာဝန်ကတော့ လူနာအပေါ်မူတည်တယ်။ စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလို့ဖြေပါတယ်။ တကယ်လို့ အမေ့ကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်ဆိုရင် အဲဒီနှလုံးတစ်ကန့်နဲ့က ခန့်မှန်းခြေ နှစ်ဘယ်လောက် နေနိုင်မယ်လို့ ထင်လဲဆရာ။ ပြီးတော့ နှလုံးအစားထိုးတာနဲ့ နှလုံးအတုတတ်တာကို ကြားဖူးတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ရော ပြန်ကောင်းနိုင်လားဆရာ။ လုပ်မယ်ဆို ငွေဘယ်လောက်လောက်ကုန်နိုင်တာလဲ ပြောပြပေးပါလား။ အမေအတွက် ဘာမျှော်လင့်ချက်ရှိလဲသိချင်လို့ မေးကြည့်တာပါ။ ပြီးတော့ ဒီရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အသေးစိတ်လေးနားလည်အောင် ရှင်းပြပေးလို့ရမလားဆရာ။ ကျွန်တော်က အမေအနားမှာ မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ကြည့်နေကတာပါ။
ရောဂါနာမည် စာလုံးပေါင်းမသေခြာရင် ပြောရခက်ပါတယ်။ နှလုံးမှာ အကန့်လဲရှိတယ်။ အဆို့ရှင်လဲရှိတယ်။ အခန်းလဲရှိတယ်။ အခန်းပျက်စီးတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဆို့ရှင်ကလဲ ၄ နေရာမှာရှိတယ်။ ကျယ်တာ၊ ကျဉ်းတာလဲ ရှိတယ်။ အကန့်က အထက်နဲ့ အောင် နှစ်ခုရှိတယ်။ ဆေးစာနဲ့သိရမှာ မှန်းပြောနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ကနေ အသေအခြာပြောနိုင်မှာပါ။
၅၇ နှစ်က မကြီးသေးပါ။ နှလုံးရဲ့သဘောက စိတ်လှုတ်ရှားတာ၊ လူလှုတ်ရှားတာကနေ သက်ရောက်ပါတယ်။ မှန်မှန်လေးလုပ်နေရင် လူကလဲ ခံနိုင်ပါတယ်။ ဆေးတွေနဲ့လဲ ထိန်းလို့ရနိုင်တာတွေရှိပါတယ်။ မသေခြာတဲ့အတွက် တိတိကျကျမပြောနိုင်တာ ဆောရီးဗျာ။
Mon, Oct 1, 2012 at 6:55 PM
၁၉၉၇ ခုနှစ်က ညာဘက် နားရွက်အောက်ဘက်နားမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ အလေးအပင်တွေ မလွန်းတော့ မျက်စိထဲ ကြယ်လတွေမြင်ရပြီး မူးသလို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေပြသတော့ အာားနည်းတယ်ထင်ပြီး အိပ်ဆေး၊ အားဆေးတွေ ပေးပေမဲ့ မပျောက်ပါ။ ပါမောက္ခ (့) နှင့်ပြကြည့်မှ ဒဏ်ရာကြောင့် အကြောညှပ်တာလို့ ပြောပါတယ်။ ဆရာဝန်ပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်တာ ပျောက်သွားပေမဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ရောက်တော့ အလေးအပင်မလို့ ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ မပျောက်တော့ဘဲ ညာဘက်နားထဲ ပစဉ်းအော်သံကြားနေရတာနေ့တိုင်းပါပဲ။ ဘယ်လိုကုသရင်၊ ဘယ်လိုပြုလုပ်ရင် သက်သာမလဲသိချင်ပါသည်။
Mon, Oct 1, 2012 at 8:58 AM
My name is (့), age 28 years. My blood test result show that Bilirubin level is 340umol/L. Is it serious case or what can happen? What should I need to do to prevent?
Please check the result. Usually the value of the patient and normal level are written within bracket in the report. The results are usually shown as follow.
• Bilirubin, Direct Serum 0.1-0.3 mg/dL 1.7-5.1 mmol/L
• Bilirubin, Indirect Serum 0.2-0.7 mg/dL 3.4-12 mmol/L
• Bilirubin, total Serum 0.3-1.0 mg/dL 5.1-17 mmol/L
If the level is high it means jaundice. The doctor will examine and do other tests. I can't tell you how serious now. Mon, Oct 1, 2012 at 9:21 PM
If the level is high it means jaundice. The doctor will examine and do other tests. I can't tell you how serious now.
၃-၁ဝ-၂၀၁၂ ဖေ့စ်ဘွတ် မေးခွန်း
သမီးလည်ပင်းမှာ အဖုသေးသေးလေး ပေါက်နေတာ ကြာနေပြီ။ ၃ လလောက်တော့ရှိပြီ။ ကြီးလည်းမကြီးလာဘူး ပျောက်လည်းမသွားဘူး။
အသက်။ လည်ပင်းမှာ နေရာ အတိအကျ။ အကျိတ်အရွယ်အစား၊ နာ-မနာ၊
အသက်က ၂၉၊ နာတော့မနာဘူး အရွယ်အစားက စပါးစေ့ထက် နည်းနည်းဘဲ ကြီးမယ်၊ လည်ပင်းအရိုးနားမှာ။
လည်ပင်းအရိုးဆိုတာ မဟုတ်သးဘူးနော်။ အရိုးဆိုတာက နောက်မှာ။ ရှေ့မှာက လေပြွန်။ နောက် မှန်ထဲကြည့်ပါ။ ရေ-တံတွေးမျိုချရင် အကျိတ်က တက်-ဆင်းဖြစ်သလား။
အလည်လောက်မှာလား။ ညှပ်ရိုးက ဘယ်-ညာရှိတာ။
ဒါဆိုရင် တက်စေ့ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုင်ကြည့်ရင် ရောင်အနေချိန်မှာ မနာဘူး။ ခပ်တင်းတင်း (မမာ-မပျော့) ရှိတယ်။ ဖြစ်တာကြာတယ်။ ကျောက်ချင်မှ ပျောက်မယ်။ တခါတလေ နဲနဲကြီးလာနိုင်တယ်။ စိုးရိမ်စရာမရှိဘူး။ နာလာရင်၊ ပိုကြီးလာရင် ဆေးသောက်ရမယ်။ စောင့်ကြည့်ရမယ်။
အခုဆေးသောက်စရာမလိုဘူးပေါ့ အဲလိုလားဆရာ။ အိမ်မှာတော့ မနေ့ကစပြီး ရေခဲကပ်ကြည့်နေတာ စိုးရိမ်လို့ပါ။
ချက်ချင်းဖြစ်တာ၊ ထိခိုက်မိတာကို ရေခဲကပ်ရင် သွေးထွက်တာ သက်သာတယ်။ နဲနဲကြာတာကို အပူကပ်ရင် အရောာင်လျှော့တယ်။ ပိုကြာတကိုလုပ်ရင် မထူးဘူး။
၃ လဆိုရင် နာမှ၊ ရောင်နေမှ Pain killer (Paracetamol) သောက်ပါ။ ရင်းသလိုဖြစ်ရင် ပိုးသေဆေး Ampicillin သောက်ပါ။ တက်စိသဘောက တနေရာမှာ ပိုးဝင်လို့ သူဆီလာရောင်တာ်။ လည်ပင်းဆိုရင် လည်ချောင်းတာ နဲ့ အသက်ရှူလမ်းဖြစ်မယ်။ ၂ ပတ်တခ့ ထူးတာရှိရင်ပြောပါ။ လိုမယ်ထင်ရင် အလင်းရောင်ကောင်းမှာ ဓါတ်ပုံ ၁-၂ ပုံပို့ပြီး မေးပါ။